ဘီလင်ဒါ သည် ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်၏ အတွင်းပိုင်း ဂြိုဟ်ရံလဖြစ်ပြီး ၁၉၈၆ ခုနှစ် ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ ၏ ဓာတ်ပုံမှတဆင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မူလက ယာယီအမည် S/1986 U5ဟု ပေးခဲ့သည်။ ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ တွင်ပေါ်သော ဘီလင်ဒါ၏ ပုံရိပ်မှာ ရှည်မျောမျောဖြစ်ပြီး ယင်း၏ ဝင်ရိုးသည် ယူရေးနပ်စ်ဘက်သို့ မျက်နှာမူလျက်ရှိသည်။ မျက်နှာပြင်မှာ မီးခိုးရောင်ဖြစ်သည်။
~25,000 km² [မှတ်စု 1]
~380,000 km³ [မှတ်စု 1]
~3.6×10၁၇ kg[မှတ်စု 1]
~0.014 m/s² [မှတ်စု 1]
~0.034 km/s[မှတ်စု 1]
Karkoschka, Voyager 2001.
JPL Solar System Dynamics.
Karkoschka, Hubble 2001.
Planetary Satellite Physical Parameters။ JPL (Solar System Dynamics) (18 October 2010)။ 2012-01-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Williams၊ Dr. David R. (23 November 2007)။ Uranian Satellite Fact Sheet။ NASA (National Space Science Data Center)။ 2012-01-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Marsden, Brian G. (1986-01-16). "Satellites of Uranus". IAU Circular 4164. Retrieved on 2012-01-27.
USGS/IAU (July 21, 2006)။ Planet and Satellite Names and Discoverers။ Gazetteer of Planetary Nomenclature။ USGS Astrogeology။ 2012-01-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။